निशान न्युज आश्विन २१, 2077
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसौरी राज्यको एक जंगलमा माकुराको ठूलो जालो देखिएको छ । जालो यति ठूलो छ कि जसमा मान्छे पनि फँस्न सक्छ । मिसौरीको वातावरण संरक्षण विभागको एक कर्मचारीले उक्त जालो देखेका हुन् । उनैले खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेको फोटो यतिबेला भाइरल बनेको छ । फोटोले धेरै आकर्षण बटु...
यौन आनन्दका लागि बाँदरले यसरी लैजान्छ...
आश्विन १, 2077 काठमाडौं । संसारभर भएका विभिन्न अध्ययनले मानिसले जस्तै जनावरले पनि यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । धेरैलाई सन्तान प्राप्तिका लागि मात्रै जनावरले यौन क्रिया गर्छन् भन्ने लाग्ने गरेको छ । तर, संसारभरका दर्...
यस्तो पनि ! नेपालमै फल्छ विश्वकै सबैभ...
भाद्र १७, 2077 काठमाडौं । के तपाइँलाई थाहा छ विश्वको सबैभन्दा महंगो तरकारी कुन हो ? यसबारे थाहा पाउँदा तपाइँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो कि यो तरकारी नेपालमै उत्पादन हुन्छ । नेपालको विशेषगरी हिमाली क्षेत्र, त्यसमा पनि कर्णाली प्...
कोरोनाको डर भगाउन हरर थेरापी अपनाउँदै...
भाद्र ९, 2077 एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चपेटामा पुरै विश्व रुमल्लिएको अवस्था छ । मानिसमा कोरोना संक्रमणको डर अत्यधिक रहेको छ । यसैबीच, जापानमा एक समूहले मानिसलाई काेराेना संक्रमणको डरबाट मुक्त गराउनका लागि अनौठो तरिका अपनाएका...
३२ रुपैयाँमै ‘यौन प्यास मेटाउन’ युवती...
श्रावण १५, 2077 भारत । हामिले अहिलेसम्म मानिसको मूल्य कति छ भन्ने थाहा हुन सकिएको छैन । हुन त मानविय मुल्यको परिकल्पना गर्न सकिदैन । संसारमा कुनै मानिसको मोल कति होला ? विश्वको ठुलो लोकतान्त्रीक देश भारतमा ३२ रुपैयाँमा मानिस बिक्री हुन्छ...
यौन सम्पर्क गरे ५ सय यूरो दिने प्रस्ताव
श्रावण १०, 2077 काठमाडौ । इन्टरनेटमा आफ्नो तस्विर राखी आफूलाई गर्भवती बनाउन पुरुषलाई खुलेआम यौन प्रस्ताव राखेपछि एक जना रोमानियाली महिला अहिले सेलिब्रेटी बनेको छन् । पश्चिमी रोमानियाको टिमिसोआरामा बस्ने यी २५ वर्षीया अडेनिया अबलुले आफूसँ...
जब न्यायाधीशले नै बलात्कृतलाई सोमत नभ...
श्रावण १०, 2077 काठमाडौं । भारतमा महिला हिंसाको घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा भने आकाश जमिनको फरक छ । न्याय पाउन बलात्कृत महिलालाई कानुन र समाजले साथ दिनुपर्छ। यस्तो लडाइँमा उसले एक्लै लडेर...
सचेत बन्नुस् अब तपाइँले सेक्स गरेको प...
श्रावण ७, 2077 काठमाडौं । तपाइँले अन्तिम पटक कहिले यौन सम्पर्क गर्नुभयो ? यो कुरा फेसबुकलाई थाहा हुन्छ । यतिमात्र होइन महिलाहरुको महिनावारी चक्र तथा उनीहरुले प्रयोग गरेका गर्भनिरोधक साधनहरुको बारेमा पनि फेसबुकले थाहा पाउँछ । प्राइभेसी इ...
कट्टु सानो सिलाउँदा प्रहरीमा उजुरी ! ...
श्रावण ३, 2077 काठमाडाैं । पसलेले खराब सामान दिएको र त्यस्तो सामान फिर्ता लिन नमानेको जस्ता गुनासाहरु ग्राहकहरुले गर्ने गर्दछन् । तर कट्टु सानो सिलाइदिएको भन्दै सूचिकारविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको चाहिँ अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । भारतमा ह...
पत्याउनुस् या नपत्याउनस्, १२ वर्षे बा...
श्रावण १, 2077 केन्यामा एक महिनाभित्र दुई वयस्क पुरुषसँग छुट्टाछुट्टै विवाह गर्न बाध्य पारिएकी एउटी १२ वर्षीया बालिकाको अधिकारीहरूले उद्धार गरेका छन् । राजधानी नाइरोबीबाट पश्चिममा अवस्थित नारोक काउन्टीमा बसोबास गर्ने ती बालिकाको आफ्नै प...
कोरानाबाट बच्न पाँच लाख रुपैयाँको सुन...
असार २४, 2077 एजेन्सी । सुन्दा पनि अच्चम लाग्ने कोरोनाबाट बच्न एक जनाले सुनको मास्क बनाएका छन् । सुनको मास्क लगाएको यो तस्बिर सामाजिक संञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार यी व्यक्ति महाराष्ट्रका शंकर कुराडे हुन् । उ...
सुनै सुनको होटल, जहाँ सुनको जलप लगाइए...
असार २४, 2077 काठमाडौं । होटलको विलासिताले धेरैलाई आकर्षित पारेको हुनसक्छ । तर यहाँ एउटा यस्तो होटलको कुरा गर्दैछौं जुन सुनले बनेको छ । बाहिर संरचनामात्रै होइन, यो होटलको ट्वाइलेट सिटमा समेत सुनको जलप छ । भियतनामको हानेईमा बनाइएको यो प...
यस्तो पनि ! अम्बिका माझीको घरमा पालेक...
असार २२, 2077 काठमाडौं । पहिले कुखुरा कि अण्डा भन्ने प्रश्न संसारभर चर्चामा छ । यसको उत्तर पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ । तर भारतको ओडिशामा एक कुखुराले अण्डाको सट्टा चल्लाको जन्म दिएको छ । गाउँले आश्चर्यमा परेर हेर्नका लागि भिडभाडसहित उपस्थि...
माछाले यसरी मान्छेले खाने वियर खाएपछि...
असार ८, 2077 तपाईँले माछाले वियर खाएको देख्नु भएको छ ? सायद देख्नु भएको छैन होला । अहिले सामाजिक सञ्जालमा माछाले बियर खाएको भिडियो भाइरल बनेको छ । भिडियोमा तपाईँले प्रष्टसँग देख्नुहुनेछ माछाले बियर खाएको छ । सुशान्त नन्दा नामक भारतीय ...
जब यी सुन्दरी अचानक पोर्न स्टार बनेपछ...
जेष्ठ ३१, 2077 एजेन्सी । अस्ट्रेलियाकी पूर्व सुपरकार चालक रेनी ग्रेसी एकाएक पोर्न मुभिमा देखिएपछि निकै चर्चा भयो । धेरै जना आश्चर्यमा परे । तर वास्तावमा उनि आर्थिक संकटमा परेपछि यस्तो कदम उठाएकी हुन् । उनी आर्थिक अवस्थाका कारण पोर्न स्ट...